Northgard: ine yekuwedzera yemahara inonzi Kukunda | Linux Vakapindwa muropa
Northgard zano revhidhiyo mutambo iyo yatatotaura nezvayo muLxA. Iri zita rinowanikwa natively yeGNU / Linux uye ikozvino rine nyowani yekuwedzera yemahara inonzi Kukunda. Uku kukura kukuru kuchavhurwa muna Gumiguru 22, ndiko kuti, mumazuva mashoma chete. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo kuHumble online chitoro kana pa chitoro chemhepo kubva kuValve.
Pakati pezvinhu zvitsva zve Northgard Kukunda ichave itsva yakamira mamiriro mutambo, kutamba wega kana mune mushandira pamwe nemaViking ako aunofarira. Akawanda mamishinari matsva ari kupihwa, achiwedzera anopfuura maawa zana emaawa ekuwedzera pakuwedzera. Aya mamishinari matsva anoita seasina kubatana, uye havana kuburitsa zvakawanda zvakawandisa, saka kuchine zvimwe zvinhu zvekuziva ...
Zvavanotaura pane mimwe mienzaniso ye matambudziko matsva mumamishini saValdemar Akatukwa, mauri munofanira kukunda muvengi ane simba munyika izere neisina kufa. Imwe nguva yechando yauya mishoni, iine mepafafrost mepu ine chando blizzards izvo zvinoita kuti zviome. Uye zvakare Kumukira, mepu yekumutsiridza Ragnarök ine hasha uye yakawanda mavara eMyrkalfars.
Mumwe nomumwe sarudzo yakasarudzwa inochinjirwa kumhuri yaunosarudza kutamba, Uye zvakare, iwe unogona kusarudza mibairo yekusimudzira yako mhuri. Mamwe ese ruzivo iwe unofanirwa kuzviongorora kana ichivhurwa. Asi mhando iyi yekuwedzeredzwa neyemahara zvemukati inokosheswa, uye haisiriyo yega, mamwe mepu akawedzerwa kare, nenyika dzinoputika, mamishinari matsva asina kuverengerwa mumutambo wepasi, zvivakwa zvitsva, dzimba itsva, nezvimwe mabhonasi mune yekuvandudza inozivikanwa seRagnarök. Kukunda kunowedzera kune iro runyorwa rwemahara emahara akagadzirwa nemugadziri Shiro Mitambo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Northgard: ine yekuwedzera yemahara inonzi Kukunda
Pixelbook Go, Google yakachipa komputa iyo ... inoita kunge inodhura kwandiri